शान्त राजधानी कहाँ के भयो ? (फोटो फिचर)
लकडाउन अपडेट शान्त राजधानी कहाँ के भयो ? (फोटो फिचर) सुनील प्रधान/हरिशजंग क्षेत्री
काठमाडौं । सरकारले अख्तियार गरेको लक डाउनको पहिलो दिन आज राजधानी शान्त देखिएको छ ।
नेपालमा कोरोना संक्रमण नफैलियोस् भनेर सरकारले आज बिहान ६ बजे देखि चैत १८ बिहान ६ बजेसम्म एक साताका लागि ‘लकडाउन’ गरेको हो । उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला (काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर) का स्थान प्रायः ठप्प छन् । सडकमा मानिसहरू छैनन् । तर केही फाट्टफुट्ट मोटरसाइकलहरू भने चलेको देखिन्छ ।
प्रहरीले मोटरसाइकल चालकहरूलाई सम्झाएर घर पठाउने गरेको छ । काठमाडौंको न्युरोड, असनलगायत बजारहरू पूर्ण सुनसान बनेका छन् ।
उपत्यकामा तरकारीको आपूर्ति हुने प्रमुख बजार कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार पनि ठप्प छ । सामाजिक सम्पर्क रोकेर भाइरसको संक्रमण फैलिनबाट रोक्न सकिने विश्व स्वास्थ्य संगठनकोे सुझाव भएपछि विश्वका अधिकांश मुलुकले लकडाउनको नीति अख्तियार गरेका छन् ।
त्यसैले नेपाल सरकारले पनि उक्त नीति अवलम्बन गरेको हो । जसले गर्दा मंगलबार बिहानैदेखि सडकहरूमा अत्यावश्यक सेवाका साधनहरू मात्रै सञ्चालन भएको देखिन्छ । सडकका चोक–चोकमा प्रहरी परिचालन गरिएको छ । प्रहरीले सवारीसाधनको जाँचलाई कडाइ पारेको छ ।
लक डाउन भनेको औषधि उपचार, खाद्य वस्तु खरिदलगायत अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर ननिस्कन सरकारले गरेको आदेश हो । सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण भएका बिरामी फेला परेपछि संक्रमणलाई थप फैलिन नदिन ‘संक्रामक रोग ऐन २०२०’ अनुसार लक डाउनको नीति अख्तियार गरेको हो ।
सरकारले दिएको आदेशलाई नागरिकले पालना गरेको देखिन्छ । सरकारले मंगलबार बिहान ६ बजेदेखि १८ गते बिहान ६ बजे सम्म सर्वसाधारणलाई घरबाहिर निस्कन निषेध गरेको हो । कोरोना भाइरस मानिसबाट सर्ने भएको हुँदा, सामाजिक र शारीरिक दूरी कायम गर्न सरकारले सबैलाई घरमा बस्न आग्रह गरेको हो ।